Home | Motor Doon Motor Repair
Motor Doon Motor Repair
Mashruucyada Tijaabinta iyo Qeybaha Goobaha Ganacsiga
Log IN / KA
Soo gal la Facebook
Inta aadan Billaabin
LighTwin Milkiilayaasha Manual
Original Lightwin Qaybo Manual
Raadi Model #
Cadaadiska Digniin Haanta Shiidaalka
Ka saar Cover
Aluminum doon celi
Visitor Project PIC
2018 Catalog Sierra Marine
Evinrude iyo Johnson 1979 iyo Horaantii
Raadi Site Tani
Kusoo dhawow Outboard-Boat-Motor-Repair.com
Boggani wuxuu leeyahay laba ujeedo:
Marka hore: Waxaan isku daynaa qaar ka mid ah mishiinnada doonka dibadda. Goobtan waxaa loogu talagalay inuu yahay khayraad ku caawiya dadka kale inay sameeyaan isla sidaas oo ay ku diiwaangeliyaan tallaabo kasta oo faahfaahin ka badan intaad ka heli lahayd buugga adeega. Haddii aad leedahay mashiinka banaanka ah oo la mid ah mid ka mid ah mashaariicdeena, waa inaad awood u yeelatid inaad isticmaasho boggan si aad uga caawiso inaad kor u qaaddo gawaaridaada dibadda.
Ta labaad: Goobtan waxaa loo bedelay qaybo wax iibsasho ah. Fikradda waa in la tuso liisto qaybo u dhigma mashiinka Johnson / Evinrude / OMC / BRP. Haddii aad riixdo xiriirka liiska "Motor List" ee kor ku xusan, waxaad ka heli kartaa liiskaaga liiska isla markaana waxaad ku arki kartaa liisto qaybo ka mid ah mootadaada oo ay weheliyaan Amazon iyo eBay links si ay kaaga caawiyaan inaad hesho qaybta aad u baahan tahay oo aad ku heshid heshiis wanaagsan nidaamka.
Mashruucan waxaa lagu bilaabay sanadihii hore 13 waxaana uu ka caawiyay kumanaan qof oo ka yimid adduunka oo dhan, inay keenaan gawaaridii hore ee dib u celinta noloshooda. Inta badan waxaan la shaqeeyaa mishiinnadan caadiga ah, markaan aad u jeclahay iyaga. Mashruucaan cusub iyo qoraalada cusub ee aad ku raaxaysato. Boggani waa mid aad u badan.
Goobtan ayaa noqotay mid caalami ah. Waxaad isticmaali kartaa xulashada luuqada oo aad ka doorato luqadaha 120! Marka aad gujiso Amazon ama xiriirka eBay, waxaad udoodsiineysaa goobta ku haboon ee goobtaada, lacagta, iyo luqadda. Qalabka doonka dibadda ayaa u muuqda inaanay jirin xuduudo, siyaasad, ama xaddidaad luuqadeed iyo goobtan ayaa u taal qof walba inuu ku raaxaysto.
Fadlan ka caawi in aad taageerto boggan iyo mashaariicda mustaqbalka adoo isticmaalaya adeegyadayada ganacsiga markaad wax soo iibsaneyso. Wax kasta oo aad ka iibsanayso qalabkeena Amazon.com waxay kaa caawineysaa taageerida boggan. Amazon.com waxay kuu keydsan kartaa lacag sababtoo ah waxay badanaa ku qoraan qayb ka mid ah iibiyeyaasha tartanka. eBay waa meel aad u fiican oo lagu raadinayo qiimaha gorgortanka, iyo sidoo kale qaybo naadir ah oo loo isticmaalo. Inta badan waxaad arki doontaa farqi weyn oo u dhexeeya iibiyaha ama qiimaha liiska tafaariiqda, qiimaha Amazon.com, iyo qiimaha eBay. Waxaad kaydin kartaa lacago badan adoo gujinaya xiriiriyahayaga. Markaad iibsato qayb ka mid ah adoo adeegsanaya Amazon ama xidhiidhada eBay, waxaynu heleynaa 5% boqolkiiba waxaan isticmaalnaa si aan u maal galino mashaariicda iyo martigelinta khidmadaha la xiriira goobta. Ma jirto kharash dheeraad ah markaad isticmaasho xiriirkayaga si aad u iibsato alaabta iyo taageerid boggan.
Waxaan sidoo kale kugu martiqaadeynaa inaad fiiriso "Faallooyinka" xiriirka menu ee kore.
Akhri wax dheeraad ah ku saabsan Ku soo dhawow Boosta -Boat-Motor-Repair.com
Fadlan riix bogga Arbacada ah or Amazon xiriirka sare si aad nagu caawiso. Waxaan helnay 4 boqolkiiba ama wax ka badan oo ah KUSAALE aad ka iibsatid eBay ama Amazon.com saacadaha 24 ee xiga. Barnaamijka dakhliga ee xiriirka ahi wuxuu kaa caawinayaa maalgelinta mashaariicda mustaqbalka, martigelinta, luqadaha, SSL ammaanka, iyo horumarinta goobta adiga oo aan kharash dheeraad ah lagugu siinin. Taageeradaada aad ayaa loo qiimeeyaa. (Xidhiidhka eBay waa mid cusub, waan arki doonaa haddii ay run tahay.)
Si firfircoon uga shaqeynaya goobta.
Johnson 5.5 qaybta HP 4 qaybta dib u soo celi
Ma hubtaa inaad haysato ...
maalin 1 todobaadkii 1 ago
Waad ku mahadsan tahay jawaabta. Anigu ...
Calaamadaha saxanka Magneto ......
Tijaabooyinka calaamadda Magneto si aad u dejisid farqiga dhibcaha iyo duulimaadka
Maya wax uun baa horay u soconaya oo ...
markii aan qaatay qaybtayda hoose ...
Maalmood toddobaadkii 1 4 ago
Xulo Luuqad Turjubaan
Dooro LanguageEnglishAfrikaansAlbaaniyaanCarabiArmeniaAzerbaijanBasqueBelarusBengaliBoosniyaBulgariaCatalanSugbaanoChinese (La fududeeyay)Chinese (dhaqanka)CroatianCzechdeenishka,HollandIsberentoIstooniyaanFilibiinFinlandFaransiiskaGalicianJoorijiyaanJarmalGreekGujaratiCreole HaitianHausaCibraanigaHindiHmongHungaryIcelandIgboIndonesiaIrishTalyaaniJapanJafaniisKannadaKhmerKuuriyaanLaoLaatiinLatviaLithuaniaMakedoniyaMalayMaltaMaoriMaaratiMongoliyaanNepalNorwayiiraanidhalaalinPortugalPunjabiRomaniaRuushSerbianSlovakiaSloveniasomaliSpainSawaaxiliiswiidishkaTamilTeluguThailandturkishUkraineUrduVietnameseWelshYadhishYorubaZulu
Taageer Taageero Boggan
Soo iibsadaha caalamiga ah ayaa soo dhaweynaya
Xidhmooyinka Champion Spark
Wixii Johnson Outboards
Wixii Warshadaha Mercury
Diyaarada Yamaha Noolaha
Wixii Honda Outboards
Finder qeybta rasmiga ah
Wire koronto Spark
Tixraaca La Xiriira Khadka Dabka
2019 Qeybaha Sierra Marine Catalog
2018 Qeybaha Sierra Marine Catalog
(2018 way fududahay in la isticmaalo marka loo eego 2019)
Milkiilaha boggani waa xubin sharaf leh AOMCI.ORG
396514 Carburetor Float iyo Assembly Arm
22 saacadood 1 daqiiqo kahor
012111 Michigan Aluminiinka Beddelka ah
Days 3 8 hours ago
Days 3 12 hours ago
398126 Johnson Evinrude Aluminium Prop
012032 Beddelaadda Michigan Aluminiinka (Pin Drive)
390237 Evinrude Johnson OMC Beddelidda Beddelidda Qalabka Aluminium (Pin Drive)
012031 Michigan Propil Aluminium (Pin Drive)
391096 Johnson Evinrude HB Aluminium Prop (Pin Drive)
OMC Evinrude Johnson OMC Aluminium Qalabka 376968 (Pin Drive)
377635 Johnson Evinrude OMC Aluminium Prop (Pin Drive)
Theme by Danetsoft iyo Danang Probo Sayekti waxyoonay by Maksimer